Jereo ny fitsarana any amin'ny lapan'ny fitsarana any New York | Vaovao momba ny dia
Jereo ny fitsarana any amin'ny lapan'ny Fitsarana New York
Trano fitsarana New York any Chinatown
New York dia iray amin'ireo tanàna eto amin'izao tontolo izao ahafahanao manao zavatra saika amin'ny fotoana rehetra amin'ny antoandro na amin'ny alina. Na iza na iza mankaleo eto amin'ity tanàna ity dia satria tiany izany.
Anisan'ireo zavatra tsy mahazatra azonao atao any New York ny manatrika fitsarana. Eny, eny, rehefa mamaky azy ianao. Naseho anay tamin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra marobe ny fomba fiasan'ny fitsapana sy ny fitsarana any Etazonia. Ho an'ireo tena liana te hahafantatra na ireo izay tia manao zavatra samihafa, drafitra tsara mety hidirana ao amin'ny lapan'ny fitsarana hijery fitsarana. Fa nahoana no tsy?
Rehefa voasambotra ny New Yorkers dia miatrika ny mpitsara amin'ny fananganana ny Fitsarana ady heloka bevava any Chinatown. Hatreto tsy mbola nisy fampisehoana sarimihetsika na fahitalavitra anao, sa tsy izany? Hay izany fa raha mankany New York ianao dia afaka miditra ary manatrika an'io karazana fialamboly hafahafa io.
Teo anelanelan'ny dimy tolak'andro sy iray tolak'andro dia niseho tamina karazana seho tsy misy fakantsary ireo tranga ireo.
Miady hevitra ny mpisolovava, mipetraka eo amin'ny dabilio ireo voampanga ary ireo izay tsy afaka madiodio dia entina any amin'ny sela izay, eny, tsy azo tsidihina (na tsy tokony hitsidika azy ireo ianao). Azonao atao ny mipetraka eo akaikin'ny fianakavian'ilay voafonja na eo amin'ny dabilio aorina miaraka amin'ireo mpianatra lalàna sy New Yorkers liana sasany.
Zavatra mahazatra sy eken'ny besinimaro izany ka raha tonga ianao ka tsy mahalala izay idiranao, lazain'ny tompon'andraikitra aminao ny tranga mahaliana indrindra tokony hojerena.
Maimaimpoana izany ary ny zavatra tokana dia tsy maintsy manana ambaratonga anglisy tena tsara ianao hanarahana ny raharaham-pitsarana sy hahitana izay hita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Jereo ny fitsarana any amin'ny lapan'ny Fitsarana New York
Tsidiho ny limes, ilay sisintany romana taloha any Alemana
La Paloma, morontsiraka manja any Frantsa